Deyn cafinta maxaa ka run ah? – Idil News
October 19, 2020 | VIDEO: Cali Cosoble oo digniin adag u diray Madaxweyne Farmaajo
October 19, 2020 | Lafta-gareen oo furay Kalafadhiga 2-aad ee Baarlamaanka K/Galbeed (Sawirro)
October 19, 2020 | VIDEO: Puntland iyo Somaliland oo ku loolamaya ganacsiga Itoobiya.
October 19, 2020 | Baxreyn iyo Israel oo si rasmi ah dib u soo ceshtay xiriirka diblumaasi
October 19, 2020 | Hiiraan: Dad ku geeryooday fatahaada uu sameeyay Webiga Shabeelle
Deyn cafinta maxaa ka run ah?
Posted By: Idil News Staff March 26, 2020
Jaran jarooyin dhowr ah ayey martaa deyn cafintu mana ahan sida loo dhigayo in ay u sahlan tahay.
Waxa hadda Soomaaliya, laga cafinayo maahan deyntii rasmiga ahayd oo dhowr iyo toban dal ku leeyihiin. Waxa la fududeynayo waa ‘‘arrears clearance’’ oo ah dulsaarkii iyo khidmadii fuushay deymihii Soomaaliya, la siiyey ilaa xorriyaddii.
Wadiiqada lagu gaaro in dulsaarka ‘‘arrears clearance’’ lagaa fududeeyo, waxay International Monetary Fund iyo World Bank, ugu wacaan ‘‘decision point’’ oo ah in aad la timaado hufnaan maaliyadeed iyo koror dakhli gudaha ah si adi laftaadu isu bixiso.
Si aad hufnaan maaliyadeed ula timaado waxaa lagugu tijaabin mashruuc yar sida ‘‘Staff–Monitored Program’’ oo Soomaaliya, hadda lagu tijaabshay. Waa tijaabo yar oo lix (6) bilood ah.
Kadib waxaa loo gudbin tijaabo kale oo ugu yaraan qaadan karta saddex (3) sano ama ka badan, hadba kartidaada iyo dadaalka aad la timaado ayey ku xiran tahay.
Tijaabadaan danbe waxaa la dhahaa ‘‘completion point’’, ama afkeena haddii aan ku suureeyo ‘‘ka buldheh.’’
Waxa aad bul ka oran wixii lagugu xiray oo dhan in aad kasoo baxdo.
Dalalka tabartooda dhaqaale yar tahay oo dhan,ayaa wadiiqadaan dambe mara, waxa loo aqoon og yahay jaran jartaan, ‘‘Enhanced Heavily Indebted Poor Countries (HIPC)’’.
Labadaas tijaabo oo midi tahay tabartaa tilaabso (decision point), midna ka buldheh (completion point), marka aad soo marto ayaa horta deynta lagaa cafin.
Soomaaliya, weli cidi deyn kama cafin, mana dhawa howshu. Tusaale mashruuca yar ee ‘‘Staff–Monitored Program’’, oo ahayd in uu lix bilood oo keliya qaato, Soomaaliya shan (5) sano ayey ku qaadatay in ay kasoo dhalaasho. July 2015, ayaa ‘‘Staff–Monitored Program’’, soo bilowday.
Tusaale kale, Dowladda Chad, ee bartamaha Afrika, ku taal May 2001 ayey buuxisay tabartaa tilaabso (decision point), in ay ka buldhahdo oo ‘‘completion point’’, gaarto waxay ku qaadatay afar iyo toban (14) sano.
April 27, 2015 ayaa Chad, loo sheegay in ay buuxisay shardiyadii laga rabay.
Wasiir Abdirahman Dualeh Beileh, asaga oo aan cidna indho sarcaadin ayuu dadkiisa runta la wadaagi karaa, sida dhabta ah ee wax u socdaana u sharixi karaa. Hayeeshee, waxuu ka door biday in uu dadka Soomaaliyeed, madaxa darbi u saaro.
Ma jiro ayaan filayaa qof Soomaali ah, oo aan ku farxayn in deynta dalkeena laga cafiyo, weliba si kalsooni leh ayaa qofkasta ugu riyaaqi, haddii aan la hoosaasin dadka.
Deyn cafintu mashruuc doorasho lagu galo ama dadka lagu indho sarcaadiyo ma noqon karto.